Ucingo Casino Imidlalo
Beehive Bedlam usebenza phezu NYX(Gaming Core) yesikhulumi ne 7 itolitji kanye injini engavamile futhi eyingqayizivele. I slot Kubonakala eyodwa ezintsha ngenxa Antics yayo Beehive futhi itolitji ukuwa isici. Variegated izici ibhonasi futhi jackpot okuqhubekayo elikhona kule Beehive Bedlam Slots kusukela lapho abadlali abakwazi bavuna izinzuzo elikhulu.
I Isidleke ugcwele ubumnandi e Beehive Bedlam Slots
Ububanzi ukubheja kuhluka 10p no- £ 500 spin ngayinye. Umdlalo unalo ukusetha beehive yokhuni yakhiwa lezinyosi kokuba izimpawu. I inhlanganisela ngokuwina get aba khona uma uphonsa 5 ukuze 15 izimpawu ezifanayo umhlaba ukwakha inhlanganisela yokuphumelela. Zonke lezi inhlanganisela kungenzeka cluster, enezingqimba noma mpo. Ngokushesha nje lapho ngokuwina inhlanganisela emazweni, izimpawu iqhaza izosuswa futhi bazobuyekezelwa Limiselelwe abasha. Amatshwayo izomashela kwaphezulu kuze futhi ngaphandle kokuba Yokuwina inhlanganisela entsha Ufika wadala.
I onsomi, blue, izimbali ezibomvu futhi pink-ezinemibala kanye Daisy kanye bee zihlanganisa izimpawu njalo slot. Ayikho uphawu zasendle likhona kodwa Free Fall ibhonasi isithonjana kukhona ngenxa okuyinto ezinye izici izoqaliswa lapho Mahhala osebenzisa Round Ufika kwabangela.
Beehive Bedlam Slots umdlalo ibhonasi izici
Lapho isidlali ihlala inhlanganisela ukuthi sihlanganisa beekeeper, embizeni uju azonikezwa ukuthi ine 20 amazinga. Njengoba nje embizeni seligcwele kuze phezulu, isici Honey Jar Ibhonasi izoqaliswa. Isikrini entsha azovula futhi uzothola ukudlala umdlalo lapho bee izozama zizinhle ukubaleka izithiyo & ukuqoqa zemali zegolide evelayo endleleni yayo.
A Free Fall uphawu kukhona kule game isizinda. On kokwehla okungenani 3 wabo, eFree Falls sici bazobuyekezelwa kwabangela. Uma ufike okungenani 3 Mahhala Falls, eziyisishiyagalombili, eziyishumi, nambili noma nanhlanu osebenzisa free azonikezwa ngokuvumelana nenani Mahhala Falls kwabangela.
Amatshwayo izinto ezinenzuzo eziphakeme zingezezimbuzi Queen Bee futhi Big Boss. Queen Bee ngeke umklomelo wena 7,500 izinhlamvu zemali lapho 15 izimpawu umdlalo. Ukuze izimpawu nanhlanu 5,000 zemali anikezwa ngu boss indoda, Daisy imiklomelo 2,000 zemali, onsomi anemibala imbali imiklomelo 125 zemali, beekeeper imiklomelo 100 zemali
kanye pink anemibala imbali imiklomelo 75 zemali.
A jackpot okuqhubekayo kungabuye iwine. On the spin zokugcina, bee fly yonkana itolitji futhi ngeke lehle zonke izinhlamvu ebhokisini. Uma lezo zincwadi zakha izwi JACKPOT, umklomelo omkhulu inganqotshwa.
Isiphetho: Beehive Bedlam Slots ukubuyekeza
Beehive Bedlam Slots iyadlaleka kuwo wonke amadivaysi possesses ukuhluka ongaphakeme. Gameplay ulula noma I esondweni-Umklamo Beehive Bedlam kuyinto enhle kakhulu. Uma ucwaninga okuthile okuhlukile nge jackpot ke lena indawo ekufanele. Spin the itolitji ka Beehive Bedlam Slots namuhla uqobo.
Noma nge iziteshi zethu Social Media:
Ngubani Olorra Management Limited
Imininingwane © 2018, Imeyili Casino. wonke Amalungelo Agodliwe.